Workamajig: Nchịkwa Ego na Nhazi Nhazi maka Mepụta Agencies | Martech Zone
Workamajig bụ usoro ntanetị maka ijikwa mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ọrụ ndị ahịa. Ihe karịrị ụlọ ọrụ 2,000 na-eji sọftụwia njikwa ahịa maka ngalaba ụlọ ha. Workamajig bụ customizable, Web-dabeere oru ngo management software na streamlines ihe niile gị gị n'ụlọnga na-eme - si ọhụrụ azụmahịa na ahịa na-eduga na staffing na okike egbu, niile ụzọ site na a oru ngo si okirikiri na-aza ajụjụ na ego na-akọ.
atụmatụ nke Workamajig -agụnye:
Accounting - ụlọ ọrụ njikwa usoro njikwa azụmaahịa jikọtara ya na sọftụwia njikwa njikwa sọftụwia iji rụọ ọrụ na mkpa niile nke ụlọ ọrụ okike.
Ọrụ Ndị Ahịa - usoro njikwa oru ngo zuru oke nke jikọtara nkenke, ihe akaebe, mmefu ego, mkpesa, ịkọwa ihe na nkwukọrịta n'otu ụzọ.
Creative - jikwaa akụrụngwa, akwụkwọ akụkọ na akụkọ mmefu ngwa ngwa ma dịkwa mfe yana faịlụ oru ngo, nzaghachi ndị ahịa na nkọwapụta ọrụ.
Media - iwepụta akwụkwọ ọnụahịa na-adabere na iwu mgbasa ozi ma soro ozi email na njikọ STRATA na SmartPlus®.
Azụmaahịa Ọhụụ - jikwaa ma mekọrịta kọntaktị, kalenda, Nweta Na-enweghị Pitching® nsuso, ohere na ịkọ akụkọ maka usoro ahịa gị.
Production - mee ngwangwa ọnụ ahịa, gbanwee atụmatụ ịzụta iwu, atụmatụ ụzọ, mepụta usoro ihe omume na chekwaa nkọwa.
Okporo ụzọ / Nchịkwa Akụrụngwa workflows na akpaka oru ngo oge na ọnọdụ
mmelite, nnwepụta otu okike gafere ọtụtụ ebe, eserese Gantt na kalenda, na ịbanye kwa ọrụ.
Tags: ụlọ ọrụ mgbasa oziịgba ụgwọnjikwa ndị ahịaatụmatụegonjikwa ọrụzụọ iwuahịa na-edugaonye oruarụ ọrụ